Rafitra ho an'ny fampiharana an-tsoratra
Rafitra fampiharana ny sary hoso-doko
by Delta Engineering / Talata 20 Janoary 2015 / Published in Various
Mieritreritra ny mandeha ho azy ny fizotry ny fampiharana ny loko? Ny Delta Application Technics dia afaka manampy anao amin'ny rafitra fangatahana loko mandeha ho azy hampihatra ny solvent (ATEX) na loko mifototra amin'ny rano amin'ny vokatrao amin'ny fomba marina sy marina.
Manome anao rafitra pumping foibe ianao izay misy pompatra samy hafa ho an'ny lokonao samihafa raha ilaina izany. Ny rafi-pitaterana manamboatra ny basy manaparitaka (izany), izay (apetraka) mihoatra ny mpampita, mankany amin'ny robot iray, sns.
►Rivotra mifono rivotra